Leveraging Nchịkọta Weebụ | Martech Zone
Ọtụtụ mmadụ na-elele nhazi saịtị ahụkarị ma ha na-ahụ weebụsaịtị nke na-arụtụ aka na Oku na-eme ihe ma ha tụọ oku ahụ na Action site na nchịkọta, na-akpọ ya akakabarede. Ọ bụrụ na ị dọpụta ya, ọ dị ka nke a:
N'ezie, nsogbu bụ na Nchịkọta Weebụ bụ Tlọ TONS nke akụ data zoro ezo nke na ọ dịghị onye na-elebara anya ma ọ bụ na-eme ihe ọ .ụ .ụ. Dịka, a na-eji nchịkọta naanị iji tụọ isi mmalite, ọchụchọ, clicks na ntụgharị. Na-eji akụkọ ndị ahụ, onye na-ahụ maka Ahịa ahụ na-eme mgbanwe ụfọdụ na nche iji hụ ihe na-eme na akụkọ. Oge olile anya a (ị nwere olile anya na ihe gbanwere) na-eme ugboro ugboro.
Pkpụrụ nke ilele nchịkọta naanị dị ka interface mkpesa ga-agbanwe. Nchịkọta abụghị naanị mkpesa mkpesa, ọ bụ nchekwa na-enweghị atụ nke omume ndị ọbịa. Jiri nka, ị nwere ike iwekọta ọdịnaya nke weebụsaịtị gị yana nchịkọta data iji mee ka ọdịnaya di ike iji mee ka ndị nleta gị ka mma.
Examfọdụ Ihe Nlekọta nke Njikọ Nchịkọta Weebụ
Have nwere ndị ọbịa 2 na webụsaịtị gị na ngwa nyocha gị na-esochi. Otu onye ọbịa na-eleta saịtị gị mgbe niile site na otu ọnọdụ ala. Onye nleta ndị ọbịa ọzọ mana usoro ya na-esochi United States na Canada. N'aka ozo, inwere ndi ọbịa abuo abuo, ma otu bu ndi njem ma onye ozo adighi.
Kedu ka ozi, ọrụ, ma ọ bụ ọbụlagodi ozi gị ga-esi kwekọọ na onye njem karịa onye na-abụghị onye njem? Ikekwe ị na-ere elektrọnik na saịtị gị. Onye njem ahụ kwesịrị ịhụ laptọọpụ dị fechaa, akpa njem na ngwaọrụ ndị ọzọ. Onye na-abụghị onye njem kwesịrị ịnwe ihe ngosipụta nke ụlọ gị na kọmputa azụmaahịa gị - ikekwe usoro gị nke nnukwu ngosipụta.
Eleghị anya ị nwere 'ihe ngosi okporo ụzọ' ebe ị na-eleta obodo ukwu ndị mepere emepe iji gosipụta ngwaahịa gị. Maka onye na-abụghị onye njem, ị ga-amachi nkọwapụta nke ụzọ ngosi na mpaghara nke ha nọ. Maka onye njem, ị nwere ike ịhazi ngosipụta nke ngosi ụzọ iji gaa obodo ndị gbara ụzọ njem mmadụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, ikekwe ịchọrọ igosi ụfọdụ agbụ gị n'okporo ụzọ ndị njem na ozi banyere usoro ụgwọ ọrụ gị dị na mba niile. Nye ndị na-abụghị ndị njem, ozi sitere n'aka ndị nwe ha ma ọ bụ ndị isi nri ma ọ bụ nchịkọta nhọrọ ọhụrụ gị.
Ọ bụrụ na ị bụ Mgbasa Ozi Adlọ Ọrụ, ikekwe ị kwesịrị ị na-egosi ọrụ ndị ahịa mpaghara na onye na-abụghị onye njem, yana akaụntụ mba nke onye njem ahụ.
Geography bụ nanị otu akụkụ nke itinye ego nchịkọta. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ ahịa ọla, ị nwere ike chọọ ịkpọsa ọrịre ncheta ncheta gị nye onye ọbịa nke zụtara mgbaaka ncheta afọ 50 gara aga. Ọ bụrụ na ị bụ ụlọ akụ, ikekwe ịchọrọ ịkwalite ọnụego mgbazinye gị otu izu tupu ịkwụ ụgwọ ọzọ ga-abịa. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-ere ahịa, ị nwere ike ịchọ kpọsaa ụkpụrụ azụmaahịa gị n'ụgbọ ala m zụtara gị.
Dynamic Content anọwo na-adịtụ ntakịrị na ụlọ ọrụ Email. Enwere ọtụtụ ihe akaebe na ịhazigharị ọdịnaya ndị ọbịa na-eweta nsonaazụ dị elu. Oge eruola na ụlọ ọrụ mmepe Weebụ na sistemụ Njikwa Ọdịnaya bidoro ị paya ntị na nke a. Itinye nchịkọta weebụ na CMS gị ga-ebute nnukwu nsonaazụ.
O di nwute, nchịkọta efu dika Google Analytics adighi enye ihe API ma ọ bụ ọkwa nke mwekota ebe ị nwere ike iwepụta data dị n'ime. Agbanyeghị, ọtụtụ ụlọ ọrụ nchịkọta weebụ kachasị. Ihe dị iche na atụmatụ a nwere ike iri ụlọ ọrụ gị ọtụtụ iri puku dollar - mana ọ bụrụ na ị na-eme ya n'ụzọ ziri ezi, ịlaghachi na itinye ego ga-adị mma.
Tags: apple iphoneahia BluetoothNso nso nke Bluetoothahia ahia bluetoothọ dị mmakedu ka esi atụ kloutidi nso ahiawepu aha
Mee 15, 2008 na 3: 29 PM
Na mbido izu a, mụ na ụlọ ọrụ akpọrọ Xtract, nke dị na Finland, kwurịtara okwu. Ha nwere ọkachamara na ichebe omume na n'oge na-adịbeghị anya, kpọmkwem maka mgbasa ozi mmekọrịta. Kemgbe mụ na ha kwurịtara okwu, amalitere m ileba anya na ụlọ ọrụ ndị yiri ya ma chọta mmalite nke akpọrọ Someric (US based). Ihe kpatara ya bụ ike inye netwọk mmekọrịta ọhụụ na ozi nyocha banyere ndị na-ege ha ntị. Nke a, n’aka nke ya, na - abawanye uru mgbasa ozi nke mkpọsa na saịtị ndị a ịkparịta ụka n’ socialntanet a.
Na mgbakwunye, elere m anya n'ihe ndị Google nwetara n'ime afọ ole na ole gara aga na otu ha si ewulite alaeze ha. Mention kwuru na nchịkọta Google anaghị enye API ugbu a, mana echere m na ha ga-eme n'oge na-adịghị anya. Tụkwasị na nke ahụ, ihe atụ ị ga-eji maka Geography mee ihe mgbe ị na-ezube nwere ike iwere nzọụkwụ na-esote site na iji maapụ niile na teknụzụ nsuso dị ugbu a na ahịa Edere m na mbido taa gbasara Google na Mahoo Mahoo.
Ntụle dị ọcha n'oge a, mana ọ bụrụ na ụlọ ọrụ dịka Garmin ga-abanye azụmaahịa na azụmaahịa. Ha ga-enwe ike inyepu sistemụ GPS ha ma dochie anya ụdị nkwado akwadoro. N'iji teknụzụ machibidoro nke na-adịghị egbochi ndị na-ekiri ihe nkiri na-ebugharị ozi, na-eme ka ahụmịhe onye ọrụ anaghị agbanwe, enwere ike ịje ozi mgbasa ozi nke naanị onye njem ahụ. Were ya otu ọkwa ọzọ ma gbakwunye na ụlọ ahịa ụlọ ahịa ọla gị ma ị nwere mgbasa ozi ekwentị mkpanaaka 3.0. Ezubere iche, onye ọrụ enyi na onye gụrụ akwụkwọ na nyocha mkpọsa.
Mee 15, 2008 na 10: 26 PM
Naanị m cents 2: M na-ebu amụma banyere Google Analytics API n'ime ọnwa 6 sochirinụ.
Mee 16, 2008 na 6: 42 AM
Google dikwa onye API aka ka o wee ju m anya na o nwebeghị otu rue ugbu a. Ọ ga-amasị m ịhụ Analytics 'triggers' .. na ndị ọzọ okwu .. ike ime outbound arịrịọ. API dị egwu, mana ị nweghị ike ịme ihe ọ bụla ruo mgbe ọ gwụchara.